command တစ်ခုတည်းနှင့် FTP သို့ဖိုင်တစ်ခုပို့ပါ Linux မှ
command တစ်ခုတည်းနှင့် FTP သို့ဖိုင်တစ်ခုပို့ပါ
ဂရပ်ဖစ်အပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးမပြုပဲ FTP ဆာဗာနှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကို၎င်း (သို့မဟုတ်ယင်း၏ပါ ၀ င်မှု) ကို terminal မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကသူတို့ကိုငါထားခဲ့တယ် Backup လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ bash script ဆာဗာမှအချက်အလက်များကို (သိမ်းဆည်းသည်) script သည်ဖိုင်တွဲများ (/ etc /)၊ တင်ပို့ထားသော database များစသည်တို့ကိုကူးယူပြီး .RAR (သို့) .7z ဖိုင်တစ်ခုသို့ password တစ်ခုဖြင့် compressed လုပ်သည်။ (လက်ရှိငါ 7z ကိုသုံးသည်) script တစ်ခုမှမရှိသောတစ်ခုတည်းသောအချက်သည် upload တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အချို့သော FTP server သို့ထို compressed ဖိုင်ကိုဤနည်းဖြင့်ဆာဗာမှသိမ်းဆည်းခြင်းကိုအခြားနေရာတစ်ခုသို့ကူးယူလိမ့်မည်။
ဒီနေ့ငါနည်းနည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့ငါပြောခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအရာတစ်ခုပေါ်လာဖို့အတွက် script ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သုံးသပ်ပြီး compressed archive ကို external FTP တစ်ခုသို့ upload လုပ်လိုက်သည်။
1 command တစ်ခုနဲ့ FTP တစ်ခုကိုဘယ်လို upload လုပ်မလဲ။
1.1 ဆံပင်ကောက်ကောက်နဲ့ FTP သို့တင်ပါ
2 ထိုဖော်ပြထားသောကြောင်း script ကိုကော?
command တစ်ခုနဲ့ FTP တစ်ခုကိုဘယ်လို upload လုပ်မလဲ။
ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်မှာ username နှင့် password ပါသော FTP တစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်ရန် command တစ်ခုမှတဆင့်ဖြစ်သည်။ ဖိုင်ကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖိုင်တွဲတစ်ခုသို့တင်ပါ။
အသုံးပြုသူနှင့်စကားဝှက်ကို တင်၍ ဖိုင်များအမြောက်အများထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုထားသော Terminal applications များသည်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြည့်စုံပြီးသား ဖြစ်၍ လိုင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဟေးအဲဒီမှာမေးခွန်း။
4 သို့မဟုတ်5ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် ... ငါထင်ခဲ့တယ် ... ဒါပေမယ့်တည်ရှိ ဆံပင်ကောက်ကောက်
ဆံပင်ကောက်ကောက်နဲ့ FTP သို့တင်ပါ
ဆံပင်ကောက်ကောက်နဲ့ကျွန်တော်အဆုံးမဲ့အရေအတွက်လုပ်နိုင်တယ်၊ ငါလိုချင်တာကိုလုပ်နိုင်တယ်။ ဒါကပဲ!
-u parameter သည်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ -T parameter နှင့်လည်းဖိုင်တစ်ခုကိုတင်ရန်၎င်း၊ နောက်ဆုံးမည်သည့် FTP နှင့်ကျွန်ုပ်မည်သည့်ဖိုင်တွဲသို့ပို့မည်ဆိုသည်ကို၎င်းပြောပြရန်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်လမ်းကြောင်းအပြည့်သို့ပို့လိုက်သည်။ :
ဤအရာသည်အသုံးပြုသူနှင့်အတူ FTP 192.168.128.2 နှင့်ဆက်သွယ်သည် အသုံးပြုသူ နှင့်စကားဝှက် စကားဝှက်ကို ဖိုင်တွဲသို့တင်ပါ SERVER_BACKUPS ဖိုင်ကိုခေါ် ဖိုင်-backup.7z
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီ command ကငါတို့အတွက်လည်းအသုံးဝင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ငါအရင်ကငါပြောခဲ့တဲ့ ... script ကဲ့သို့သော
ထိုဖော်ပြထားသောကြောင်း script ကိုကော?
ငါအထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူများထံမှတောင်းဆိုမှုများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များကိုထည့်သွင်းအထူးသဖြင့် script ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေပါတယ်။
ငါပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ချင်တာကတော့ save file ကို FTP ထဲကို upload လုပ်နိုင်ဖို့ command တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲငါရှင်းပြလိုက်တာပါပဲ။
အသုံးပြုသူမှအကြံပေးသောနောက်တစ်ခုမှာငါအရန်ကူးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါအီးမေးလ်တစ်ခုပို့ရန်ဖြစ်သည် စာပို့ သို့မဟုတ် ပြင်ပ script, ငါပိုကောင်းလိမ့်မယ် sendmail သုံးပါလိမ့်မယ်။ sendmail ကိုအသုံးပြုခြင်းရဲ့အသေးစိတ်ကတော့အီးမေးလ်ကို encryption ... SSL နှင့်အခြားမည်သည့်စာသားမဆိုသင်ပို့ရန်သင်၏ GMail အကောင့်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ထို့အပြင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး က GTalk's XMPP သို့မဟုတ် Hotmail's ကို အသုံးပြု၍ IM မှမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့ရန် (Live သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာ၊ ကျွန်ုပ်ခေါ်ဆိုသည်ကိုပင်ငါမသိ) သတိပြုရန်ပိုမိုတက်ကြွသောအသိပေးမှုပုံစံတစ်ခုအဖြစ်အကြံပြုခဲ့သည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံး GTalk နှင့်အတူလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Hotmail အတွက်ငါ Hotmail အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိရဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထောက်ပံ့ဖို့လိုတယ်၊
နောက်တစ်ခုမှာ Facebook သို့မဟုတ် Twitter မှပေးပို့သောသတိပေးချက်များသို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျများအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ Twitter အတွက်သင်အသုံးပြုနိုင်တယ် ကျီးကန်း Facebook အတွက်ဆိုရင်၊ fbcmd။ applications နှစ်ခုလုံးက terminal မှနေ၍ ဒီ social network များနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။
ငါတင်ပို့တဲ့ sql ၏သမာဓိကိုစစ်ဆေးဖို့လည်းစဉ်းစားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကပိုနည်းသေးတယ် :)
ကောင်းပြီ၊ ထပ်ဖြည့်စရာမလိုတော့ပါ။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Bash ၌ရေးသားထားသည့်အမြောက်အများကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်အတွက်သတင်းပို့ရန်ကျွန်ုပ်အတွက်အချိန်သိပ်မယူနိူင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ » command တစ်ခုတည်းနှင့် FTP သို့ဖိုင်တစ်ခုပို့ပါ
- ဆာဗာပိတ်ထားလျှင်သို့မဟုတ်ပေးပို့မှုမပြုလုပ်နိုင်ပါကသတိပေးချက် @ ရှိပါသလား။
Terminal / console ကိုနှစ်သက်သူများထံမှဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုရတာအလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။
FTP ဆာဗာသည်အွန်လိုင်းရှိမရှိ၊ အီးမေးလ်မပို့လျှင်အီးမေးလ်ပို့ရန်အကြံဥာဏ်ကောင်းပါသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ် ^ အကောင့်သို့ယူပါမည်။
Moses Serrano ဟုသူကပြောသည်
သင်၏ backup script ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးနောက်ဆုံးဖိုင်ကို Dropbox သို့ upload လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် (https://github.com/andreafabrizi/Dropbox-Uploader) နှင့် sendmail အားဖြင့်အဆုံးမှာအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ပါ။
Moisés Serrano အားပြန်ပြောပါ
Gaara သင်ဤအတွက်မှန်ကန်သောကိရိယာကိုကြိုးစားရမည် - lftp
mirporing ကိုပင်ထောက်ပံ့သည်၊ ftp မှ repos ထပ်တူပြုခြင်းသည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။
အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာ၎င်းသည်ဤစနစ်၏လှပမှုဖြစ်သည်၊ တူညီသောရလဒ်ကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဖိုင်များကို ftp server သို့ upload လုပ်ရန်စီမံခြင်းနည်းလမ်းကိုပြသသည်၊ ၎င်းသည်အနည်းငယ်သာဆင်သော်လည်း၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။
echo အသုံးပြုသူရဲ့ password ကို
/ server / ftp မှပဲ့တင်သံ cd / directory / မှ
} | server.ftp ftp
OOOHHH စိတ်ဝင်စားတယ်။ ငါဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတာမသိဘူး😀
အခြားနည်းလမ်းများ၊ ဥပမာ wput နှင့်အတူ
wput file_to_upload ftp: // အသုံးပြုသူ: PASS@123.123.123.123: 21
telnet အဟောင်းကိုသုံးပြီး script ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးချင်သူများအတွက်:
server_ip << EOF ftp -n
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Linux တွင်အစပြုသူဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာသိပ္ပံကိုအသုံးပြုသူအဆင့်တွင်သာ - ပရိုဂရမ်းမင်း၊ သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုကျွန်ုပ်မသိရှိပါ။ ငါကဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်နေပြီး၊ ဒုတိယစာပိုဒ်ရဲ့အဆုံးမှာတည်နေရာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖတ်တယ်။ အဲဒီစကားလုံးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ ဆိုလိုတာကတည်နေရာ၊ တည်နေရာ၊ တည်နေရာ၊ နေရာ။ တည်နေရာဟူသောစကားလုံးသည် "http://dle.rae.es/?id=NXeOXqS" ဆိုသော RAE ဆိုသည့်အတိုင်းအခြားအရာတစ်ခုကိုဆိုလိုသည်။
Phabricator: Software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတစ်ဦးကအပြီးအစီးပလက်ဖောင်း